हैरान सौगात - मनोरञ्जन - नेपाल
बितेको वर्ष अभिनेता सौगात मल्लका लागि सुखद रहेन । आधा दर्जन फिल्म रिलिज भए । तर, लुट २ ले मात्र बक्स अफिसमा कमाल देखायो । यसकै सफलतामा पनि सौगात दिल खोलेर हाँस्न सकेनन्, कारण न उनको अभिनयले तारिफ बटुल्यो, न फिल्मले । तैपनि, उनलाई फिल्मको ओइरो लागेको लाग्यै छ । यस वर्षचाहिँ उनी अघिल्लो वर्ष झरेको साख उकास्ने दाउमा थिए । त्यसका लागि सिमोस सुनुवार निर्देशित झ्यानाकुटी फलदायी हुन सक्थ्यो । विडम्बना ! यो फिल्म रिलिज मिति तोक्दै सरेको सर्‍यै छ । जस्तो : सुरुमा ८ भदौ तय गरिएको थियो । त्यसपछि ३० भदौ पुर्‍याइयो । अब यो मितिमा पनि प्रदर्शन नहुने भएको छ र १७ कात्तिक तोकिएको छ । यसरी पटक–पटक सर्दा फिल्मको छवि बिग्रन्छ भन्ने हेक्का नहोला र सौगातलाई ? ध